Home News Dalal badan oo wali Cambaareeynaayo qaraxyadii shalay ka dhacay Muqdisho
Qaar ka mid ah dowladdaha iyo Ururadda Caalamiga ah ayaa si kulul u cambaareeyay Qaraxyadii shalay lagu weeraray Kontoroolka Tiyaatarka Soomaaliya.
Sidoo kale dowladda Sacuudi ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay ka caawin doonto sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadkii ay waxyeelado kasoo gaartay Qaraxyadii shalay ka dhacay Muqdisho.
Al-Shabaab ayaa Laba Qarax ku qaaday Barkontorool oo ay ku sugnaayeen Ciidamada Ilaaladda Madaxtooyadda oo ku taalla Tiyaatarka Qaranka iyo waliba daljirka Dahsoon ee Muqdisho.
Ku dhawaad 20 qof oo Isugu jira Askar iyo Dad Shacab ah ayaa ku dhintay Qaraxyadii Shalay ka dhacay Muqdisho.
Previous articleWararkii ugu Dambeeyay xiisad ka taagan gobolka Hiiraan!
Next articleDowlada Saudi arabia oo ka hadashay qaraxyadii Muqdisho ka dhacay
Nin ka tirsanaa Al-Shabaab oo gacanta lagu dhigay!!